Ukuthenga kuyintokozo eCambodia | Izindaba Zokuhamba
Ukuthenga kuyintokozo eCambodia
UMariela Carril | | I-Cambodia, General, Ukuhamba kwe-Asia
El Umbuso waseCambodia yizwe elincane eliseningizimu yenhlonhlo ye-Indochina futhi lingelinye lama- izindawo eziningi zezivakashi e-Southeast Asia.
Uma kukhulunywa ngokuthenga, kufanele sazi ukuthi iCambodia Akuyona indawo yokuthenga efana neThailand., ngokwesibonelo, kepha sisengaletha ekhaya izikhumbuzo eziningi nezipho. Umbuzo uwukuthi yini okumele uthenge futhi kuphi ngakho-ke bhala phansi lezi zeluleko.
1 Thenga eCambodia
2 Yini ongayithenga eCambodia
3 Ungathenga kuphi eCambodia
I-Cambodia akuyona i-mecca yokuthenga ngoba ayinayo ingqalasizinda abanye bomakhelwane bakho abanazo. Ngeke ubone izitolo ezinkulu ezinkulu noma amabhilidi amakhulu anezitolo ngaphakathi, kodwa inezimakethe eziningi ngakho-ke uma kukhulunywa ngokuthenga imisebenzi yezandla, indawo enhle.
Into yesibili okufanele uyazi ukuthi uma ufuna hamba uyothenga okwezivakashi noma ufane nowendawo. Uma uthanda i-adventure yokutholakala, khona-ke izimakethe zendawo nezitolo ezincane zingcono kakhulu, uma ukhetha ezanamuhla bese uya ezindaweni zokuthenga.
Umehluko phakathi kwalezi zindawo ezimbili intengo: ezindaweni zokuthenga amanani aphezulu futhi awukwazi ukuheha noma yini. Kokuhlangenwe nakho okuhle kwamasiko iseluleko sami ukuthi ungaphuthelwa izimakethe.
Yini ongayithenga eCambodia
Kusukela ngawo-80 kuya phambili, ohulumeni nezinhlangano ezithile bakhuthaze abantu baseCambodia ukuthi baphinde bathole amakhono abo njengabakhandi nabaluki.
Izinhlelo eziningi zokuvuselelwa sezenziwe futhi ngenxa yalokho zikwazile ukuthuthukisa imisebenzi yezandla kazwelonke efana izindwangu zikakotini noma zikasilika, i-rattan, uqalo, ubumba noma ukwenziwa kokhuni
Lezi zinhlelo zokukhuthaza ubuciko bendawo ziholele ezintweni esizibona ezimakethe nasezitolo: ifenisha, okokwembatha, izikhwama, izikhwama zemali, imidwebo nokunye okuningi
Kulokhu kungezwa i- izinto zakudala, the obhasikidi bezintambo, okuhle amabhokisi we-betel, the amatshe ayigugu, the irayisi iphepha imihlobiso, the izinto zesiliva, ukukhiqizwa kabusha kwezifanekiso zeBuddha zakudala futhi i izikhafu krama ezilukwe ngabantu baseKhmer.
Ungathenga kuphi eCambodia
Kuya ngokuthi ukuleliphi idolobha noma isifunda ezweni: enhlokodolobha noma e-Siem Reap, ngokuyisisekelo.
Ake siqale ngenhloko-dolobha. Ubizwa ngegama Igama I-Pen kepha futhi ungakuthola kubhaliwe njenge- Phnom Penh. Ngesikhathi seFrance kwakuthathwa njengelinye lamadolobha amahle kakhulu e-Indochina.
Ukuthenga kungumsebenzi ohlukahlukene. Kunezimakethe ezintathu ezinkulu bese kuba nezimakethe eziningana ezincane nezinye izimakethe zendabuko lapho kuthengiswa khona izinto zokudla kwansuku zonke. Kukhona futhi izitolo ezahlukahlukene, izimakethe ezincane, omkhulu izimakethe, izitolo zikasilika, izitolo eziyizikhumbuzo, ama-boutique nezindawo zokuhweba zazo zonke izinhlobo.
Izintengo ngokuvamile ziba ngamadola aseMelika futhi namuhla izitolo eziningi zamukela amakhadi wesikweletu. Noma kunjalo kuyalulekwa njalo ukushintsha imali ngoba ukukhwabanisa kukhona ezitolo ezincane.
El Imakethe Yasebusuku ye Igama I-Pen Kusosebeni lomfula futhi kuyindawo enhle yokuthenga izinto eziyizikhumbuzo, imisebenzi yezandla, izingubo kanye nezinto ezifuna ukwazi ezahlukahlukene. Kuvulwa ngoLwesihlanu nangezimpelasonto kusuka ngo-5 ntambama kuya phakathi kwamabili (iSisowath Quay, phakathi kuka-106 no-108).
El Imakethe yama-Olimpiki Isondele i-Olympic Stadium futhi ama-wholesales ngakho-ke kuyintandokazi yendawo. Ungathola izaphulelo ezinhle ngakho-ke kunconywa.
El Imakethe yaseRussia Ithengisa konke okuncane: ubuciko, i-elekthronikhi, izinto zakudala, okuqoshwe ngokhuni, izinto zikasilika nezingubo ngamanani amahle. Iphinde ithengise ubucwebe kodwa kufanele wazi ukuthi uhlukanisa kanjani inkohliso kokuhle.
Mayelana nezikhungo zokuthenga kukhona Lucky Isuphamakethe, iketanga elikhulu kunawo wonke ezweni. Imikhiqizo kazwelonke neyangaphandle yilokho ozokuthola kuwo wonke amagatsha ayo.
El Izitolo U-Sorya Kuyisakhiwo esikhulu esinezitezi eziyishumi nambili esinezitayela zasentshonalanga nezindawo zokudlela nezitolo eziningi. Kuku-63rd Street, ibhulokhi elilodwa ukusuka eMakethe Ephakathi, futhi kuvulwa ngo-9 ekuseni kuya ku-9 ntambama
Mayelana nezitolo ziningi futhi akunakwenzeka ukukhuluma ngazo zonke, kepha ngizokutshela lokho izitolo eziningi zitholakala eduze neMakethe Ephakathi, endaweni engu-178, 240, 51 no-282.
Bagxila ekunikezelweni kwezivakashi ngokuqoshwa kwamaBuddhist, usilika, ubucwebe, izikhumbuzo nezithombe ezibaziweyo: Cizinsalela Ingcweti, UKashaya Silk, Bliss, The ULézard Okuluhlaza okwesibhakabhaka no I-Mulberry esitolo ezinye zezitolo ongazivakashela.
Uma ufuna ukusiza ngokungeziwe ekuthengeni ungaya ku- Rehab Craft Cambodia okuyinhlangano engenzi nzuzo engeyabantu baseCambodia abakhubazekile.
Benza ubucwebe besiliva, okuqoshwe ngokhuni, okokugqoka, okokugqoka kukasilika, nokunye okuningi. Ungavakashela ngisho nomhlangano wokusebenzela. Kuku-322, 10A Street kanti kukhona nesitolo esidayisa izinto ezidayisa emgwaqweni u-278 1A. Kuvulwe kusukela ngo-8 ekuseni kuye ku-5 ntambama
Kepha kunjani shiya ukuthenga Siem Vuna o Siem I-Riep? Inhlokodolobha yesifundazwe sase-Siem Riep futhi ingamakhilomitha ayisishiyagalombili kuphela ukusuka e-Angkor yasendulo. Yingakho kuhlala kunezivakashi.
Nayi imidwebo yobuciko, izitolo zemfashini, izitolo zezikhumbuzo kanye nohla oluhle lwe- ubucwebe, izinto zesiliva, imifanekiso enamacwecwe, okuqoshiwe kwamatshe nokhuni, izinto zobumba nokunye okuningi
Izimakethe ezinhle kakhulu zigxile enkabeniBavula zonke izinsuku bathengise konke. Lezi zimakethe ezivulekile ezibandakanya amatafula okudla kanye nokwenziwa ngama-buskers. I-Haggling isemthethweni.
Ingabe i- Imakethe yomgwaqo Angkor ngezitebele zalo ezingama-bamboo ezingama-200 ezithengisa lokho okukhiqizwa yimiphakathi yasendaweni nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni: izingubo, imidwebo eyenziwe ngosilika, onodoli, izikhwama ezenziwe ngezinto ezenziwe kabusha, okuqoshwe ngokhuni nesiliva.
El Imakethe yakudala noma I-Phsar Ama-Chas Yindala kunazo zonke futhi ithengisa izinto zansuku zonke nokudla, kusuka ezingutsheni nakubucwebe kuya kumasobho, ilayisi, isinkwa namaxoxo athosiwe. Kuvulwe kusuka ngo-7 ekuseni kuya ku-8 ntambama
Ngakolunye uhlangothi, njalo ngoMgqibelo, ngeSonto nangoLwesibili kuvulwa imakethe yangaphandle ebizwa ngokuthi Made in Cambodia. Kukhona abenzi bomsebenzi bendawo ngakho-ke izinga lezingubo, ubucwebe, imidwebo namathoyizi liphakeme kunezinye izimakethe. Futhi namanani, kepha kufanelekile ngoba uthenga ikhwalithi.
-izithombe ezenziwe ngezandla ze-siem zivuna-
Ekugcineni, uma uthanda imisebenzi yezandla kepha ufuna ukuyithenga ngqo kubachwepheshe, ungavakashela i- Inhlangano Yezingcweti ye Angkor. Inikeza imihlangano yokufundisana kanye nokulingana ngezitebele ezingama-20 lapho ukuthengisa kuhamba khona ngo-100% kubenzi bezandla. Kungaphakathi kwedolobhana loQeqesho, ku-Route 60.
Vele kunezindawo eziningi ongazithenga eCambodia, kepha lezi yizona eziyisisekelo kakhulu futhi ezinconywayo emadolobheni ayo amabili ahambela kakhulu. Khumbula ukuhlala uhaga, ungahlali nentengo yokuqala umthengisi akutshela yona futhi ungalokothi uthenge ubucwebe uma ungazi ukuthi ungazibona kanjani ezangempela kusuka kwezamanga. Kamuva, ukuthenga eCambodia kuyajabulisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » I-Cambodia » Ukuthenga kuyintokozo eCambodia
Vakashela iHobbiton eNew Zealand
Inkunzi yaseWall Street